Wiil Soomaali ah oo si xun loola dhaqmay | Qaran News
Wiil Soomaali ah oo si xun loola dhaqmay
Writen by Qaran News | 2:59 am 18th Nov, 2020
Wiil Soomaali ah oo si xun loogula dhaqmay magaalada Manchester
Zac Adan wuxuu sheegay inuu argagax ka qaaday dhacdadaas
Zac wuxuu markii hore damacsanaa inuu cilmiga sharciga ka dhigto jaamacad kale, ka hor inta uusan go’aansanin inuu luuqadaha ka barto jaamacadda Manchester
Mar uu Aadan ka laabtay dukaan ku yaalla jaamacadda agagaarkeeda, ayaa albaabka jaamacadda lagu weydiiyay kaarkiisa aqoonsiga, sida uu BBC-da u sheegay.
“Aqoonsigeyga waxaan ku watay gacanta waxana isku dayeen inay xoog iiga faro-maroojiyaan. Intaas waxaa xigay in islamarkiiba darbiga wajiga la ii saaray,” ayuu yidhi.
Zac wuxuu sheegay in dhammaan ardayda jaamacadda la weydiiyo kaararkooda aqoonsiga marka ay albaabka galayaan.
“Ma jirin wax wadahadal ah oo na dhex maray. Darbiga ayey igu nabeen waxayna ii sheegeen inaan u ekahay qof daroogada ka ganacsada. Sababtu maxay tahay? Waayo waan madoobahay jaakad ayaana xiranahay miyaa?”
Muuqaalka la faafiyay ayaa laga arkayaa ciidanka ilaalada oo kasii dhaqaaqaya kaddib markii ay arkeen kaarkiisa aqoonsiga.
Mr Adan ayaa sheegay in uu UK soo dagay dhowr sano ka hor markii uu kasoo guuray Talyaaniga, “marar badanna uu la kulmay cunsuriya”.
Laakiin wuxuu intaas ku daray in “Britain ay tahay mid ka mid ah dalalka ugu soo dhaweynta fiican, uuna aaminsan yahay inay ka mid tahay waddamada kaalmaha ugu horreeya uga jira dhinaca aqbalitaanka ajaanibta. Laakiin marka ay arrimaha noocan oo kale ah dhacaan ay sharaf dhac u keenayaan waddanka oo idil.”
Wuxuu maamulka Jaamacadda Manchester ka dalbaday inay raalligalin ka bixiyaan dhacdadaas, isaguna uu doonayo inuu la hadlo maamulaha ugu sarreeya.
“Waxaan rabaa in la ii oggolaado inaan nabad ku noolaado hoygeygana aan ku galo nabadgalyo, mana doonayo inay i joojiyaan oo tacaddi ii geystaan dad aan lacag ku siinno inay i amnigeenna sugaan,” ayuu yidhi.
Afhayeen u hadlay maamulka Jaamacadda, oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa yidhi: “Maalintii Sabtida, oo ay taariikhdu ahayd 14-kii November waxaa nalagu soo wargaliyay dhacdo halis ah waxaana si deg deg ah u billownay baadhitaan.
“Si joogto ah ayaan ula xidhiidheynay cidda ay arrintan saameysay, waxaana si joogto ah ula socodsiin doonnaa halka ay wax marayaan.
“Nabadgalyada iyo fiyoobida ardaydeenna waxaan mar walba siineynaa mudnaanta koowaad, arrimaha noocan ahna waxaan u qaadannaa si dhab ah.”